Jesosy: Ny mofon'aina | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Raha mitady ny teny hoe mofo ao anaty Baiboly ianao dia mety ho hita ao amin'ny andininy 269 izany. Tsy mahagaga izany satria ny mofo no ahitra voalohany ahandro isan'andro amin'ny faritr'i Mediterane sy ny sakafo fototry ny olon-tsotra. Ny voamadinika dia nanome ny ankamaroan'ny proteinina sy gliosida ho an'ny olona nandritra ny taonjato maro ary na arivo taona aza. Jesosy dia nampiasa ny mofo amin'ny maha-mpanome aina azy ary hoy izy: «Izaho no mofo velona izay avy any an-danitra. Izay mihinana izany mofo izany dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia sakafo ho ahy - ho fiainan'izao tontolo izao » (Jaona 6,51).
Jesosy dia niresaka tamin'ny vahoaka izay nanome sakafo mofo dimy sy hazandrano dimy, andro vitsivitsy talohan'izay. Ireo olona ireo dia nanaraka azy ary nanantena fa hanome azy ireo sakafo indray. Ny mofo izay nomen'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny andro taloha dia namahana azy ireo nandritra ny ora vitsivitsy, fa rehefa avy noana indray izy ireo. Nampahatsiahy azy ny mana i Jesosy, loharanon-tsakafo manokana iray izay tsy naharitra vetivety fotsiny ny razany. Nampiasa ny hanoanana ara-batana izy hampianarana azy ireo amin'ny lesona ara-panahy:
"Izaho no mofon'ny fiainana. Ny razanareo nihinana ny mana tany an-efitra ka maty. Ity no mofo izay avy any an-danitra ka izay mihinana azy dia tsy ho faty » (Jaona 6,48-49).
Jesosy no mofon'aina, mofo velona ary nampitahainy ny tenany amin'ny sakafo manala ny Isiraelita sy ny mofo mahagaga izay efa nohanin'izy ireo. Hoy Jesosy: Tokony hitady azy ianao, mino azy, ary hahazo fiainana mandrakizay amin'ny alalany fa tsy hanaraka azy, manantena ny hisakafo mahagaga.
Jesosy dia nitory tao amin'ny synagoga tao Kapernaomy. Ny sasany tamin'ireo olona dia nahalala an'i Joseph sy Maria manokana. Lehilahy iray fantatr'izy ireo, izay fantatry ny ray aman-dreniny, izay nilaza fa manana fahalalana sy fahefana avy amin'Andriamanitra. Izy ireo dia niankina tamin'izy ireo ary nilaza taminay hoe: “Tsy I Jesosy ve izany, zanak'i Josefa, izay fantatsika ny rainy sy ny reniny? Ahoana no ahafahany miteny ankehitriny: avy tany an-danitra aho? » (Jaona 6,42-43).
Nentin'izy ireo ara-bakiteny ny tenin'i Jesosy ary tsy azony ny fanoharana ara-panahy izay nataony. Ny sary an'ohatra momba ny mofo sy hena dia tsy vaovao taminy. Biby tsy tambo isaina no natao sorona noho ny fahotan'olombelona tamin'ny taonarivo. Nasiana nohanina ireo nofon'ireo biby ireo.
Ny mofo dia nampiasaina ho toy ny manao sorona manokana ao amin'ny tempoly. Ny mofo, izay napetraka ao amin'ny fitoerana masin'ny tempoly isan-kerinandro ary avy eo dia nohanin'ny pretra, nampahatsiahy azy fa Andriamanitra no mpamatsy sy mpitaiza azy ary mitoetra lalandava eo imasony izy ireo. (Nomery 3: 24,5-9).
Ren'izy ireo avy amin'i Jesosy izay mihinana ny nofony ary misotro ny rany no lakilen'ny fiainana mandrakizay: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona sy misotro ny rany ianao, dia tsy manana fiainana any ho anao. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy » (Jaona 6,53:56 sy).
Mahatezitra indrindra ny fisotroan-dra ny olona izay efa ela nampianarina fa fahotana izany. Ny fihinanana ny nofon'i Jesosy sy ny fisotroan'ny rany dia sarotra ho an'ny mpianatra azy ihany koa. Betsaka ny nivily an'i Jesosy ary tsy nitsahatra nanaraka azy tamin'io fotoana io.
Rehefa nanontany ireo mpianatra 12 i Jesosy raha handao azy koa izy, dia sahy nanontany i Petera hoe: "Tompo, aiza no halehanay? Ianao dia manana tenin'ny fiainana mandrakizay; ary nino izahay ka nahatsapa: Ianao dia Ilay Masin'Andriamanitra » (Jaona 6,68-69). Mety ho sahiran-tsaina toy ny hafa ny mpianany, kanefa nino an'i Jesosy izy ireo ary nanankina ny ainy taminy. Angamba izy ireo nitadidy ny tenin'i Jesosy taty aoriana momba ny fihinanana ny nofony ary misotro ny rany raha nivory izy ireo mba hihinana ny zanak'ondrin'ny Paska amin'ny sakafo hariva farany: "Fa rehefa nihinana izy, Jesosy dia nandray ny mofo, nisaotra sy namaky azy, ary nomeny ny mpianatra ary hoy izy: Raiso, hano; izany ny tenako. Ary nandray kapoaka Izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy ka nataony hoe: Misotroa avokoa; ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro hamela heloka » (Matio 26,26: 28).
Henri Nouwen, mpanoratra kristiana, mpampianatra ary pretra, dia matetika no nieritreritra ny mofo sy divay nohamasinina tao amin'ny Holy Communion ary nanoratra izao manaraka izao: "Ny teny nolazaina tamin'ny serivisy ho an'ny vondrom-piarahamonina, raisina, voatahy, tapaka omena, fintino ny fiainako amin'ny maha pretra ahy. Satria isaky ny mihaona amina mambra ao amin'ny latabatra aho dia mandray mofo, misaotra izany, manapaka ary manome azy ireo. Ireo teny ireo dia mamintina ny fiainako amin'ny maha-kristiana ahy, satria amin'ny maha-Kristiana iray no niantsoana ahy ho mofo ho an'izao tontolo izao, mofo izay nalaina, notahina, notapahina ary nomena. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny hoe hamintina ny fiainako amin'ny maha-olona ahy ny teny, satria ny fiainan'ny olon-tiako dia azo jerena amin'ny fotoana rehetra iainako. »
Ny fihinanana mofo sy fisotro divay amin'ny fanasan'ny Tompo dia mahatonga antsika ho iray amin'i Kristy ary mampifandray antsika kristiana samy isika. Ao amin'i Kristy isika ary Kristy ao amintsika. Tena tenan'i Kristy isika.
Rehefa mandinika an'io taratasy io amin'i Jaona ianao dia manontany tena amin'ny tenako hoe ahoana no fihinanana ny nofon'i Jesosy ary misotro ny ran'i Jesosy? Hita amin'ny fankalazana ny Sakramenta ve ny fahatanterahan'ny nofon'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy? Ataoko angamba fa tsy izany! Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ihany no ahafahantsika mahazo ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika. Jesosy dia nilaza fa ny fiainany no fiainany ho an'ny fiainana izao tontolo izao: «Ny mofo izay homeko dia hanina ho ahy - ho fiainan'izao tontolo izao» (Jaona 6,48-51).
Avy amin'ny teny manodidina antsika no takatsika fa «mihinana sy misotro (hanoanana sy hetaheta) "no dikany ara-panahy amin'ny hoe" avia ary minoa "satria hoy i Jesosy:" Izaho no mofon'ny fiainana. Izay manatona ahy tsy mba noana; ary izay mino ahy tsy hangetaheta intsony » (Jaona 6,35). Izay rehetra mino sy mino an'i Jesosy dia miditra amina firaisana tokana aminy: "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy" (Jaona 6,56).
Ity fifandraisana akaiky ity dia tsy maintsy vita aorian'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalàn'ny Fanahy Masina nampanantenaina ihany. «Ny fanahy no manome aina; ny hena dia tsy mahasoa. Ny teny izay nolazaiko taminao dia fanahy ary fiainana » (Jaona 6,63).
Jesosy dia maka ny fiainany manokana ho modely: "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy" (Jaona 6,56). Tahaka ny niainan'i Jesôsy tamin'ny alàlan'ny Ray dia tokony hiaina ao aminy isika. Ahoana no fomba niainan'i Jesôsy tamin'ny alàlan'ny Ray? "Ary hoy Jesosy taminy: Raha asandratra ny Zanak'olona dia ho hitanareo fa Izaho sy tsy manao na inona na inona ho ahy, fa araka ny nampianarin'ny Ray ahy, dia hiteny aho" (Jaona 8,28). Nihaona tamin'i Jesosy Kristy eto isika amin'ny maha-olona miaina tanteraka tanteraka, tsy miankina tsy miankina amin'ny Ray Andriamanitra. Amin'ny maha kristiana antsika dia mijery an'i Jesosy izay milaza izao: «Izaho no mofo velona izay avy any an-danitra. Izay mihinana izany mofo izany dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia sakafo ho ahy - ho fiainan'izao tontolo izao » (Jaona 6,51).
Ny famaranan-teny dia hoe, tahaka ireo mpianatra 12 dia manatona an'i Jesosy isika ary manaiky ny famelan-keloka sy ny fitiavany. Isika dia mifamihina sy mankalaza amin'ny fanomezana ny fanavotana. Rehefa mahazo isika dia mahatsapa ny fahalalahana amin'ny ota, fanamelohana ary fahafaham-baraka izay ao amin'i Kristy. Izany no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tanjona dia ny hiaina ny fiainany eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fianteherana amin'i Jesosy ihany!